Ukuphononongwa kunye namanqaku oMbono othile weHlabathi ngu-Alessandro Baricco-Ikkaro
yokuqalisa >> Iincwadi >> Umbono othile wehlabathi ngu-Alessandro Baricco
Ndiyafunda SEDA y Imihlaba yeCrystal ngu-Alessandro Baricco kwiminyaka emininzi eyadlulayo. Eyokuqala ndiyifunde kaninzi, eyesibini ilahlekile kwimemori yam, kodwa lo mbhali ndimhloniphile. Ke xa ndabona le ncwadi yokujonga kwakhona kwilayibrari andizange ndicinge ngayo. Ndiyathanda ukubona ukuba ndifunda ntoni ebantwini :)
Umbono othile wehlabathi yincwadi yoqwalaselo lweencwadi. Ayiveli kwiincwadi ozithandayo, kodwa kwiincwadi ozithandileyo kwisithuba esimalunga nonyaka. phakathi ko-1 no-2011.
Kukho iincwadi ezingama-50, nganye inophononongo malunga namaphepha ama-3, apho isixelela khona ngokuvela kwakhe, iyelenqe okanye ibali elinxulumene nencwadi. Yincwadi yeencwadi, uhlobo esingabandakanya kulo I-84, iCharing Cross Road.
Zonke ezibhaliweyo kwaye zixelelwe ngendlela ethe-ethe.
Andizukuzandisa. Ndibhala kuphela ezincwadini oziphononongayo kwaye zeziphi ezinomdla kum xa ndizifumana kwilayibrari okanye ngexabiso elifanelekileyo.
Yintoni iingqondi ezikwazi ukuyenza?
Bayayazi indlela yokubiza izinto
Iincwadi ezinomdla kum
Iingcambu zobuRomaNgu-Isaya Berlin
Uthuli lwaseMelikanguRichard Brautigan
Ukuzivocavoca ngokomoya kunye nefilosofi yamandulongu-Pierre Hadot
Utyelelo lukagqirha wegumbingu-Per Olov Enquist
Idemokhrasi: Ngaba iCosa può fare uno scrittore?, nguAntonio Pascale noLuca Rastello
Abafazi ngenkulungwane ye-XNUMXnguEdmond noJules Goncourt
Yihla, MosesNguWilliam Faulkner
Iinyosi kunye nezigcawu: Ingxabano yabadala kunye namaNamhlanjeNguMarc Fumaroli
Magellan: Indoda kunye nesenzo sakheNguStefan Zweig
Inkosazana ebandakanyekileyonguWilliam Goldman
Akukho ndawo. Kwenye indawonguChristi Wolf
IGatoperdonguGiuseppe Tomasi di Lampedusa
Amabali apheleleyo eNtshonaNgu-Elmore Leonard
Ibali elichukumisayo, elimangalisayo nelikhuluNguDave Eggers
Ekhaya. Imbali emfutshane ngobomi babucalanguBill Bryson
Isidlo sakusasa eTiffany'sNguTruman Capote
Kwintendelezo yengcukanguHilary Mantel
Ukufa kweKultur der NiederlagenguWolfgang Schivelbusch
Umqhekeki kunye nenkundla. Spinoza, Leibniz kunye nesiphelo sikaThixo kwihlabathi lanamhlanjengu-Matthew Stewart
2666Iinguqulelo zika-Roberto Bolaño
Ubukhosi obungenakuphikiswangu-Victoria de Grazia
Napoléon ukuya eMoscownguAnka Muhlstein
Vula. IinkumbuloNgu-Andre Agassi
I-Olive Kitteridgengu-Elizabeth Strout
IFantozzi totalenguPaolo Villaggio
I-anatomy yomzuzwananguJavier Cercas
I-Storia delle idee del calciumNgu-Mario Sconcerti
Imfazwe yePeloponnesiannguDonald Kagan
I-trilogy yeAdamsbergnguFred Vargas
I-Sage ye-Century Trilogy: Umthombo uyaphuphuma, obu busuku bokwenyani, UCousin Rosamund, nguRebecca West
U-Divine Suzanne Lenglen, oyena mdlali we-tennis ubalaseleyoUkuhlaziywa nguGianni Clerici
Indlu yoonobuhle abaleleyoNgu-Yasunari Kawabata
UPadre Pio. IMiracoli kunye nezopolitiko nell'Italia del NovecentonguSergio Luzzatto
Umlweli wezithunzingu-Inka Parei
Ukuthandana kwimilenze emithathu. Ukufuna kukaGlenn Gould ngokujonga izinto ngokugqibeleleyo ngePiano egqibeleleyonguKatie Hafner
Amaxesha anzimaNguCharles Dickens
Ibhitshi laseChesilNgu-Ian McEwan
Isichazi magama sikaMtyholiNgu-Ambrose Bierce
UClaus noLucasnguAgota Kristof
Inkcubeko yamaNazi. Ubukrelekrele, inkcubeko kunye nobomi bentlalo kwiReich ReichNguGeorge L. Mosse
U-scimmie wavakala engaqondanga uscite dalla gabbiaNguDario Voltolini
Umvuzo wangoMgqibeloNgu-Beppe Fenoglio
Imbali yobuqunguCharles Darwin
Kuyandihlekisa xa enika umbono wakhe kwiinoveli zolwaphulo-mthetho okanye kwizinto ezonwabisayo kunye nezimvo ukuba akaboni uburharha ekulindeni afunde incwadi yonke ukuze afumanise ukuba ngubani umbulali.
Kwaye xa ephawula ukuba akazukuphinda afunde iinoveli kwakhona, kuphela izincoko, zokuba ufuna iincwadi ezimfundisa okuthile. Nangona, njengoko sibona kwimbali yakhe, uqhubeka kunye neenoveli. Kodwa elo binzana libuyisa iinkumbulo ezininzi kuba yeyona nto wayesifundisa ngayo kwisikolo samabanga aphakamileyo. Funda izinto ezikufundisayo. Kwaye ngokuhamba kweminyaka, ndiye ndahamba ndingafundi nasiphi na isincoko saya kuba luhlobo olulawula ukufunda kwam.
Into endiyithandayo kakhulu kwaye endisayifaka "kuphononongo" lwam kukuba iqala ngokuthetha ukuba ize njani kule ncwadi. Kuba umntu othile uyicebisile kuwe, kuba usibonile isembozo wasithanda, kuba usifunde kwiphephancwadi, njl. Ndandinomdla kakhulu kule mini i-anecdote aqala ngayo ukuthetha ngencwadi nganye.
IGenesis kaGuido Tonelli
Ubuzwilakhe bonxibelelwano ngu-Ignacio Ramonet
1 Iincwadi ezinomdla kum
2 Iincwadi ezingandifuni
3 Amanye amanqaku